देशहरु आआफ्ना स्वार्थ, अडान र चिन्ताले लम्बियो जलवायु वार्ता – Janata Sandesh
देशहरु आआफ्ना स्वार्थ, अडान र चिन्ताले लम्बियो जलवायु वार्ता
२०७८ कार्तिक २७, १०:४२ मा प्रकाशित
स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ लम्बिएको छ।
सम्मेलनको अन्तिम घोषणासम्बन्धी ड्राफ्ट तयार पार्न भइरहेका वार्ताहरु लम्बिँदा तोकिएको अवधि नोभेम्बर १२ मा सम्मेलन नसकिएको हो।
जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव टार्नका लागि अपनाइने भावी रणनीतिसम्बन्धी वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर देशहरुको स्वार्थ र अडानका कारण वार्ता लम्बिएको हो।
कोइला तथा अरु खनिज इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा जानका लागि दिइने सहुलियत तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि गरिब देशलाई दिइने वित्तीय सहायतासम्बन्धी वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
बढ्दै गएको समुद्र सतहका कारण जोखिममा आएका साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार आफूहरुको जमिन तीव्र गतिमा डुब्दै गएको बताएका थिए।
सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव रोक्ने दिशामा काम गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
वैज्ञानिकहरुले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिएमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव रोक्न सकिने बताएका छन्।
पेरिस जलवायु सम्झौताको मुख्य अंश पनि त्यही हो। सो लक्ष्य अहिले कायम रहेका नीति तथा वाचाअनुसार पूरा हुने देखिँदैन। त्यसका लागि सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ। तर अहिलेको नीति हेर्दा सो अवधिमा उत्सर्जन झण्डै १४ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ।
उत्सर्जनमा निकै न्यून भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको अग्रपंक्तिमा नेपालसहितका अतिकम विकसित, हिमाली तथा साना टापु राष्ट्रहरु रहेका छन्।
यी देशले जलवायुजन्य विपदसँग जुझ्नका लागि धनी विकसित देशबाट वित्तीय सहयोग पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर धनी देशहरु आफ्नो वित्तीय दायित्व सकेसम्म सीमित गर्न चाहन्छ।
यस्तै उत्सर्जन कटौतीका लागि खनिज इन्धनको निर्भरता हटाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा विकासशील र अर्थतन्त्र विस्तारको क्रममा रहेका देशहरु बाधक बनेका छन्। भारत, ब्राजिलसहितका देशहरु अझै केही वर्ष खनिज इन्धनको प्रयोग ठूलो मात्रामा गर्न चाहन्छन्। सोही कारण जलवायु वार्ता लम्बिएको हो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित सम्झौतामा कोइला र खनिज इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने वाचालाई कमजोर पारिएको छ।अभियन्ताहरुले त्यसको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् भने अतिकम विकसित, हिमाली तथा साना टापु राष्ट्रहरुले त्यसको गम्भीर प्रभाव आफूहरुले भोग्नु पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ड्राफ्टमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौतीका लागि देशहरुले आफ्नो समय सीमा अघि ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
कोप–२६ मा सहभागी भएका नेपाली जलवायु अध्येयता डा. विमल रेग्मीका अनुसार हाल तयार पारिएको सम्झौताको ड्राफ्ट निकै कमजोर र सामान्य छ। उनले भने, ‘जलवायु वित्तका बारेमा विशेष व्यवस्था आवश्यक तहमा गरिएको छैन। जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र त्यसका लागि गरिनु पर्ने वित्तीय सहयोगको मुद्दा संकटमा छ।’
नेपालसहित अतिकम विकसित देशहरुले कोप–२६ मा न्यूनीकरण, अनुकूलनसँगै जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। तर धनी देशहरुले हानिनोक्सानीको वित्तीय भार अनुकूलनले नै समेट्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपालले हानिनोक्सानीको मुद्दा समेट्नका लागि ‘ग्लास्गो क्लाइमेट फाइनान्स फेसिलिटी अन लस एण्ड ड्यामेज’ स्थापित गर्न माग गरेको थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन।
अमेरिकासहितका धनी देशहरु अनुकूलन वित्तका लागि सहयोगी देखिए पनि हानिनोक्सानीको वित्तीय सहयोगमा उनीहरु पन्छिएका छन्। ड्राफ्ट हेर्दा पेरिस जलवायु सम्झौताको आर्टिकल ६ ले निर्धारण गरेको १.५ डिग्रीको सीमा प्राप्त हुने सम्भावना नदेखिने उनले बताए। उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले कृषिमा गरेको प्रभाव तथा त्यसबाट उम्किनका लागि अपनाउन सकिने उपायहरु र सहयोगको मुद्दा विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। तर ड्राफ्टमा मानव अधिकार र आदिवासी समुदायको अधिकारको कुरा राम्रोसँग राखिएको छ।’
यस्तै क्रायोस्फेयरको विषय समेटिनु केही हदसम्म सकारात्मक रहेको सहभागी जलवायु अध्येता डा. रेग्मीको भनाइ छ।
नेपालले यो सम्मेलनमा आफ्नो मुद्दा र अडानहरु राख्न सफल भएको र ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको बताएका रेग्मीले त्यसलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
२०७८ कार्तिक २९, ०७:०५ मा प्रकाशित
२०७८ जेष्ठ ९, १८:१८ मा प्रकाशित
२०७७ असार ५, १८:५९ मा प्रकाशित